PressReader - Isolezwe: 2017-10-13 - Kuzocelwa imali yokulungisa umonakalo wezikhukhula
Kuzocelwa imali yokulungisa umonakalo wezikhukhula
UHULUMENI waKwaZulu-Natal uzofaka isicelo esikhwameni esibhekele izinhlekelele kuzwelonke ukuze kulungiswe umonakalo odalwe yizikhukhula.
Lokhu kushiwo nguNdunankulu wesifundazwe uMnuz Willies Mchunu esithangamini nabezindaba eThekwini izolo. Uqinisekisile nokuthi isifundazwe sesikhonjwe njengendawo ehlaselwe yinhlekelele. UNdunankulu uqale waba nomhlangano neKhabhinethi eyethulela umbiko ngale nhlekelele nezinhlelo zokulungisa umonakalo.
Utshele abezindaba ukuthi izikhukhula zithikameze izikole ezingu-133 ezidinga ukulungiswa esifundazweni.
“Umonakalo wezikole kuphela ubalelwa kuR136 million esingakabi nawo. Asikwazi ukubeka isikhathi esiqondile okuzolungiswa ngaso izikole ngoba sisazocela esikhwameni sezinhlekelele esingazi ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthola imali,” kusho uMchunu.
Uthe ezikoleni ezithintekile ezinye bezivele zisakhahlanyezwe yisiphepho sangenyanga edlule. Kuzona kukhona nezinye eziyizikhungo zokumakela u-matric. Ugcizelele ukuthi bazokwenza konke okusemandleni ukuthi kungaphazamiseki ukubhala kukamatric ngesonto elizayo. Uveze nokuthi imali etholakalayo izoqala ilungise lapho kuphuthuma khona kakhulu.
UNdunankulu uveze nokuthi yize izitamkoko zikhahlamezeke kakhulu ngemvula yangoLwesibili bayabona ukuthi vele kunenkinga yazo.
“Sivumelene neKhabhinethi ukuthi kudingeka iphenywe futhi isukunyelwe indaba yezitamkoko. Sizokhuluma nomasipala abahlukene kulungiswe izitamkoko ngoba kuyacaca ukuthi zinenkinga. Sithole nokuthi ezinye izakhiwo ezikhahlamezekile bezivele zingakhiwanga kahle yingakho sizolandela ukuthola izinkontileka ezithintekayo kuzona,” kusho uMchunu.
Mayelana nesimo sezibhedlela ebeziphazamisekile kusukela ngoMsombuluko uthe ukusebenza sekubuyele esimeni. Kulezo zibhedlela kubalwa neKing Edward eThekwini obekuphazamiseke kuyo amagumbi ayisithupha okuhlinza. UNdunankulu uthe izolo uhlangane noNgqongqoshe wezeMpilo esifundazweni uDkt Sibongiseni Dhlomo okuqinisekisile ukuthi izibhedlela seziyasebenza yize kusalungiswa kwamanye amagumbi. Nokho uthe imvula yangoLwesibili ayenzanga umehluko emadamini wacela umphakathi ukuthi uqhubeke nokonga amanzi. Ubonge abakwa-Eskom okuthiwa bakhiphe onjiniyela abalungisa ugesi othikamezeke ezindaweni ezehlukene.
“Kusukela kuqale izikhukhula ngakhulula abanye ongqongqoshe kweminye imisebenzi ukuze babhekane nodaba lwezikhukhula. Sinxusa umphakathi ukuthi uqhubeke ulalele izexwayiso ukuze uphephe,” kusho uNdunankulu.